Piwik Versus Google Analytics: Ny tombony azo amin'ny an-toerana Analytics | Martech Zone
Piwik Versus Google Analytics: Ny tombony azo amin'ny an-toerana Analytics
Alahady, May 15, 2016 Alahady, May 15, 2016 Douglas Karr
Nanana mpanjifa izahay ary nanoro hevitra an'i Piwik izahay. Nahita olana lehibe momba ny fanaovana tatitra tamin'ny Google Analytics sy orinasa voaloa izy ireo Analytics noho ny habetsaky ny mpitsidika tonga any amin'ny tranonkalany. Ireo tranonkala lehibe dia tsy mahatsapa fa misy izy roa olana amin'ny latency sy fetran'ny data miaraka amin'ny Google Analytics.
Ny mpanjifa dia manana vondrona tranonkala manan-talenta ka naka Analytics anatiny dia ho mora. Miaraka amin'ny fahafaha-manamboatra namboarina mifototra amin'ny sehatra misy azy ireo, ny vondrona marketing dia homena marimarina kokoa Analytics, amin'ny fotoana tena izy, tsy misy lesoka statistika mifototra amin'ny santionany an'ny mpitsidika.
Raha mahatsapa ianao fa voafetran'ny Google Analytics, piwik mety ho safidy tsara hafa Fiarahamonina Piwik loharanom-baovao misokatra ny fanontana Analytics fitaovana izay misy fanavaozana tsy tapaka sy famoahana vaovao maimaim-poana. Piwik PRO On-Premises misy karazana fampiasa premium fanampiny sy serivisy. Piwik PRO dia manolotra a cloud solution (izay mbola fanananao ny angona) raha tsy tianao ny hampiantrano azy ao anatiny. Piwik manana feno fampitahana ny vahaolana tsirairay amin'ny tranokalan'izy ireo.
Ampidino ny fampitahana feno
Piwik koa dia namoaka infographic miaraka amin'ny tombontsoa rehetra atolotry ny Google Analytics. Marina fa sary mitanila ity. Google Analytics dia manome tokoa Google Analytics 360 ho an'ny mpanjifa orinasa. Ary tsy tokony handeha tsy hilazana izany fa manana tombony amin'ny fampidirana Webmaster sy Adwords Google izay tsy homen'ny mpamatsy iray hafa velively.
Piwik PRO Features
Piwik dia ahitana ny tatitra statistika mahazatra rehetra: ny teny lakile ambony sy ny motera fikarohana, ny tranokala, ny pejy ambony URL, ny anaram-pejy, ny firenena mpampiasa, ny mpamatsy, ny rafitra fikirakirana, ny fizarana ny tsenan'ny mpitety, ny famahana ny efijery, ny birao VS finday, ny firotsahana (fotoana eo amin'ny toerana, pejy isaky ny fitsidihana , fitsidihana miverimberina), fampielezan-kevitra ambony, fanovana manokana, pejy fidirana / fivoahana ambony, fisie fisintomana, ary maro hafa, voasokajy ho efatra lehibe Analytics sokajy tatitra - mpitsidika, hetsika, mpanondro, tanjona / e-varotra (tatitra 30+). jereo Lisitr'ireo fiasa feno nataon'i Piwik.
Fanavaozana ny data amin'ny fotoana tena izy - Jereo ny fizotran'ny fitsidihana ny tranonkalanao amin'ny fotoana tena. Makà fomba fijery amin'ny antsipirihany momba ireo mpitsidika anao, pejy izay notsidihin'izy ireo ary tanjona naterak'izy ireo.
Dashboard azo namboarina - Mamorona tabilao vaovao miaraka amin'ny fikirakirana widget mifanaraka amin'izay ilainao.
Dashboard an'ny tranonkala rehetra - ny fomba tsara indrindra ahazoana topimaso ny zava-mitranga amin'ny tranokalanao rehetra indray mandeha.
Evolisiona - Data momba ny metrika ankehitriny sy taloha ho an'ny laharana amin'ny tatitra rehetra.
Analytics amin'ny e-varotra - Mahatakatra sy manatsara ny orinasa an-tserasera noho ny e-varotra mandroso Analytics Toetoetra.
Fanaraha-maso ny fanovana tanjona - Araho ny tanjona ary fantaro raha mahafeno ny tanjon'ny orinasa ankehitriny ianao.
Event Tracking - Fandrefesana izay fifandraisan'ny mpampiasa amin'ny tranokalanao sy ny fampiharana anao.
Fanarahana ny atiny - Fatra handrefesana ny fiheverana sy ny tsindry ary ny CTR ho an'ny sora-baventy sary, sora-baventy ary singa rehetra ao amin'ny pejinao.
Site Search Analytics - Araho ny fikarohana nataonao tamin'ny motera fikarohana nataonao.
Dimensions Custom - Manendre izay angon-drakitra mahazatra ho an'ireo mpitsidika anao na zavatra ataonao (toy ny pejy, hetsika,…) ary avy eo alaivo sary an-tsaina ny tatitra momba ny isan'ny fitsidihana, fiovam-po, fijery pejy, sns. Isaky ny refy namboarina.
Geolocation - Tadiavo ireo mpitsidika anao mba hahitana marina ny Tany, ny Faritra, ny Tanàna, ny Fikambanana. Jereo ny antontan'isa ho an'ny mpitsidika amin'ny Sarintany Iraisam-pirenena iray araky ny Country, Region, City. Jereo ireo mpitsidika anao farany amin'ny fotoana tena izy.
Tetezamita pejy - Jereo izay nataon'ny mpitsidika taloha sy taorian'ny nijereny ny pejy manokana.
Overlay pejy - Asehoy mivantana ny antontan'isa eo an-tampon'ny tranonkalanao miaraka amin'ny takelaka arosonay.
Tatitra momba ny hafainganana sy pejy - Manara-maso ny hafainganan'ny haingana ny tranokalanao manolotra atiny ho an'ireo mpitsidika anao.
Araho ny fifandraisan'ny mpampiasa - Fanarahana mandeha ho azy ny fisintomana rakitra, tsindrio ny rohy tranokala ivelany, ary ny fanarahana ny pejy 404 tsy voatery.
Fanarahana ny fanentanana Analytics - Tsikaritra ho azy ao anaty URL-nao ny masontsivana fampielezan-kevitra Google Analytics.
Araho ny fivezivezena avy amin'ny motera fikarohana - Maherin'ny 800 ny milina fikarohana samihafa voatanisa!
Tatitra mailaka voaomana (tatitra PDF sy HTML) - Atsofohy ao anaty app na tranokalanao (40+ Widget misy) na ampidiro ireo sary PNG amin'ny pejin-tranonkala, mailaka na fampiharana fampiharana.
Annotations - Mamorona naoty an-tsoratra amin'ny kisary misy anao, mba hahatsiarovanao ny hetsika manokana.
Tsy misy fetra data - Azonao atao ny mitahiry ny angon-drakitrao rehetra, tsy misy fetra fitahirizana, mandrakizay!
Integrations - miaraka amin'ny maherin'ny 40 CMS, rafitra amin'ny Internet na fivarotana Ecommerce
Mobile App Analytics miaraka amin'ny Piwik iOS SDK, ny Android SDK, ary ny Titanium Module.
Tags: safidy hafa amin'ny google analyticsanalytics apitahirin-kevitra momba ny analyticsfetran'ny analyticsfampiantranoana fanadihadianafanadihadiana an-toeranapiwikrahona piwikvondrom-piarahamonina piwikpiwik propiwik versus gapiwik mifanohitra amin'ny google analyticspiwik vs gapiwik vs google analyticsanalytics amin'ny fotoana tena izyanalytics amin'ny fotsy fotsy
Ny sehatra Ecommerce haingam-pandeha ho an'ny Desktop sy finday